Nhau dzeBhaibheri: Sauro—Mambo Wokutanga waIsraeri - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Ona Samueri anodururira mafuta pamusoro pomunhu. Ndozvavaisiita kumunhu kuratidza kuti akanga asarudzwa kuva mambo. Jehovha anoudza Samueri kudururira mafuta pamusoro paSauro. Mafuta chaiwo anonuhwira zvakanaka.
Sauro haana kufunga kuti akanga akanaka zvikuru zvokuva mambo. 'Ini ndiri wendudzi yokwaBhenjamini, gotwe muna Israeri,' anoudza Samueri. 'Munotaurireiko kuti ndichava mambo?' Jehovha anoda Sauro nokuti haaedzeseri kuva mukuru naanokosha. Ndokusaka lye achimusarudza kuva mambo.
Asi Sauro haazi murombo kana kuti munhu muduku. Anobva mumhuri yakapfuma, uye akatsvinda chose, murume murefu. Anenge murefu netsoka imwe kupinda aninani muna Israeri! Sauro aivawo mumanyi zvikurusa, uye murume ane simba kwazvo. Vanhu vanofara kuti Jehovha asarudza Sauro kuva mambo. Vose vanodanidzira kuti: 'Mambo ngaararame!'
Vavengi vaIsraeri vakasimba sanekare. Vachiri kuparira dambudziko guru vaIsraeri. Nokukurumidza Sauro aitwa mambo, vaAmoni vanokwira kuzorwisana navo. Asi Sauro anounganidza uto guru, uye anokunda vaAmoni. Ikoku kunofadza vanhu nokuti Sauro ndimambo.
Makore zvaanopfuura, Sauro anotungamirira vaIsraeri mukukunda kuzhinji vavengi vavo. Sauro anomwanakomanawo akashinga anonzi Jonatani. Jonatani anobetsera Israeri kukunda hondo zhinji. VaFiristia vachindori muvengi akaipisisa wavaIsraeri. Rimwe zuva zvuuru nezvuuru zvavaFiristia zvinouya kuzorwisana navaIsraeri.
Samueri anoudza Sauro kumirira kusvikira auya ndokupira chibairo, kana chipo, kuna Jehovha. Asi Samueri anononoka kuuya. Sauro anotya kuti vaFiristia vachatanga hondo, saka anopfuurira ndokupira chibairo amene. Panosvika Samueri pakupedzisira, anoudza Sauro kuti haana kuterera. Samueri anoti. 'Jehovha achasarudza mumwe munhu wokuva mambo pana Israeri.'
Pashure Sauro anosatererazve. Saka Samueri anomuudza kuti: 'Kuterera Jehovha kunokunda kuita chipo chamakwai akanakisisa kwaari. Nokuti hauna kuterera Jehovha, Jehovha haazokuchengeti samambo waIsraeri.'
Tingadzidza chifundo chakanaka makuri. Kunoratidzira kuti kugaroterera Jehovha kunokosha sei. Uyewo, kunoratidzira kuti munhu akanaka sezvo Sauro ave ari, angachinja ndokuva akaipa. Hatitongodi kuva vakaipa, tinoda here?
1Samueri ganhuro 9 kusvikira 11; 13:5-14; 14:47-52; 15:1-35; 2 Samueri 1:23.
Pamufananidzo, Samueri ari kuitei, uye nei?
Nei Jehovha achida Sauro, uye murume akaita sei?
Mwanakomana waSauro anonzi ani, uye mwanakomana wacho anoitei?
Nei Sauro achipa chibayiro pane kuti amirire Samueri kuti azoita izvozvo?
Chii chatingadzidza munhoroondo yaSauro?
Verenga 1 Samueri 9:15-21 uye 10:17-27.
Mafungiro aSauro okuzvininipisa akamubatsira sei kuti asaita zvinhu asina kufunga apo vamwe varume vakamuzvidza? (1 Sam. 9:21; 10:21, 22, 27; Zvir. 17:27)
Verenga 1 Samueri 13:5-14.
Chivi chipi chakaitwa naSauro paGirgari? (1 Sam. 10:8; 13:8, 9, 13)
Verenga 1 Samueri 15:1-35.
Ndechipi chivi chakakomba chakaitwa naSauro chine chokuita naAgagi, mambo wavaAmareki? (1 Sam. 15:2, 3, 8, 9, 22)
Sauro akaedza sei kupembedza zvaakaita achinakurira vamwe mhosva yacho? (1 Sam. 15:24)
Nhasi tinofanira kuteerera nyevero ipi kana tikayambirwa? (1 Sam. 15:19-21; Pis. 141:5; Zvir. 9:8, 9; 11:2)